Streama: gadzira yako wega semba yeNetflix sevhisi neichi chishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Streama: gadzira yako wega semba yeNetflix sevhisi neiyi app
Yekutenderera masevhisi zvirokwazvo ari pano kuti agare Uye ndezvekuti ndiani wevaverengi vedu asina kumboshandisa chero yeaya marudzi emasevhisi kana kungonzwa nezvawo. Sezvo, nekuti ivo vanokupa iwe kuburitsa zvemukati pasina kukosha kwekuzvichengeta pane ako madhizaini, zvinowanzove zvinokwezva.
Asi kunyangwe zvakadaro kune vazhinji vasingade mabasa aya Zvakanaka, chimwe chezvakakura zvakasarudzika kubva pane izvi ndechekuti urikubhadhara chete kuve nhengo uye kwete yezviri mukati (kana zviri izvo) uye ndosaka vazhinji vachida kubhadhara izvo zvirimo uye ndezvazvo.
Uye iyi nharo inoshanda, nekuti pane yangu nyaya ini ndinofarira kuve nemaalbum eangu andinodisisa maartist kunyangwe kune akateedzana uye mabhaisikopo ini ndinofarira kufambisa masevhisi.
Kuisa izvi padivi zvishoma, Nhasi tichataura nezve yakanakisa kunyorera iyo ingafarirwe nevazhinji yevaverengi vedu vanodiwa vanofarira kuchengeta nhevedzano uye mafirimu.
Uye ndizvozvo nhasi len isu tichazopa Streama, ine basa rekupa seNetflix -style sevhisi, Kuti mushandisi ave neyavo sevhisi yekushambadzira.
1 About Streama
2 Maitiro ekuisa Streama paLinux?
Chaizvoizvo Streama ndeye yemahara, inozvibata-yega inomiririra midhiya inoshambadzira server inomhanya paJava
Seva iyi inogona kuiswa imomo pamakomputa kana kuiswa pane server yekuwana kubva kune webhu browser kana nhare mbozha ine mukana kune network uye browser.
rukova inoshanda seyako wega yeNetflix system kutekenya ako maTV, mavhidhiyo, audios uye mafirimu.
Streama ndeyewebhu yakavakirwa kunyorera yakanyorwa neGrails 3 (server padivi) ine SpringSecurity uye zvese zvepamberi zvinhu zvakanyorwa muAngularJS. Iyo yakavakirwa-mukati mutambi iri zvachose HTML5 yakavakirwa.
Ichi chishandiso inogona kuve yakanakisa imwe nzira kune Kodi uye Plex.
Zvimwe zvezvimwe zvinotonhorera zveStreama zvinosanganisira:
Nyore kuisa kumisikidza. Unogona kudhawunirodha iyo Docker semuenzaniso uye kumisikidza yako media midhiya mumaminetsi kana kuisa yakajairwa vhezheni pane yako yemuno kana VPS kana yakatsaurwa server.
Dhonza uye udonhedze rutsigiro kurodha media media
Rarama sync yekutarisa rutsigiro. Unogona kutarisa mavhidhiyo neshamwari dzako, mhuri kure. Hazvina basa kuti vari kupi. Wese munhu anogona kuona imwecheteyo vhidhiyo panguva imwe chete.
Yakanaka yakavakirwa-mukati vhidhiyo inoridza yekutarisa / kuteerera kumavhidhiyo uye odhiyo.
Yakavakwa-mubrowser kuti uwane multimedia mafaera pane server.
Multi-mushandisi rutsigiro. Iwe unogona kugadzira ega ega mushandisi maakaunzi emhuri yako nhengo uye uwane midhiya server panguva imwe chete.
Streama inotsigira yekutamba pause sarudzo. Mira kutamba chero nguva uye Streama anoyeuka kwawakapedzisira kusiira.
Streama inokwanisa kuona mabhaisikopo uye mavhidhiyo uye zvimwe zvakafanana zvinoratidza kuti iwe uwedzere.
Iyo yemahara zvachose uye yakavhurwa sosi
Streama inogona kuiswa pazvikamu zvakasiyana, asi sekutaura kwevagadziri, hazvishande nemushini wakaderera-zviwanikwa, saka hushoma hwe2GB ye RAM inodikanwa.
Maitiro ekuisa Streama paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa Streama pane yavo Linux kugovera, inofanirwa kufunga kuti chikuru chinodiwa yekumisikidza nekuitwa kwayo ndeyekuti yako system ine Java yakaiswa.
Streama inoda JAVA 8 kana kuti gare gare, ndoda OpenJDK, saka kana usina, unogona kubvunza kune dzidziso kuti uise chero cheizvi mukugovera kwako.
Iye zvino kurodha pasi Streama Tichafanirwa kuvhura terminal mune system uye mairi tinonyora unotevera kuraira:
Waita kurodha pasi, izvozvi tichaenda kupa mvumo yekuuraya kune ichangobva kurodha faira. Isu tinoita izvi nekuita unotevera kuraira:
Chekupedzisira tinogona kuendesa iyo faira nekukanya kaviri pairi kana kubva kune iyo terminal ne:
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pekushandisa, kumisikidza uye kuisirwa kwaStreama sebasa raunogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Streama: gadzira yako wega semba yeNetflix sevhisi neiyi app
Rudzi rwePlex ...
Nyore DirectMedia Layer raibhurari yekurerutsa yekunyora mitambo uye multimedia kunyorera
XCP-NG yakasununguka imwe nzira kuCitrix XenServer